Kenya oo qaramada midoobay Ku,eedaysay inay kaalmo lacageed siiso Al-shabaab… | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Kenya oo qaramada midoobay Ku,eedaysay inay kaalmo lacageed siiso Al-shabaab…
Xoghayaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya Macharia Kamau ayaa sheegay in Qaramadda Midoobay ay 10% kaalmadda ban iidanimo siiyo Al-shabaab si ay ugu damaanad qaadan nabad geliyo marka meelaha ay heystaan Al-shabaab gargaarka la geeynayo.
Kamau ayaa mid dhaqankeeda lid ku ah ku tilmaamay qaraar khamiistii lasoo dhaafay kasoo baxay Qaramadda Midoobay oo ku saabsanaa maalgelinta Argaxisadda, kaasi oo Heey’addu ay ku sheegtay in lala xisaabtamo kuwa argagixisadda maalgeliya.
Wargeyska the standard ee Kenya kasoo baxa ayaa waxaa uu kasoo xigtay Xoghayaha Arrimaha Dibadda in kaalmadda Soomaaliya lasiiyo Sanadkii oo dhan 120 billion oo shilling-ka Kenya ah ay Al-shabaab ka helaan 12 billion oo Shilling-ka Kenyan ah.
Hadalka Masuulka Kenya u hadlay ayaa waxaa uu kusoo aadayaa kadib markii Golaha Amaanka ee Qaramadda Midoobay uu mel mariyay in dalalka xubnaha ka ah Jamciyadda Dowladaha ay fuliyaan sharciyadda ka dhan ka ah maalgelinta argagixisadda.
Hadalkaan ayaa waxaa uu keeni karaa jawaab celin adag oo ka timaada Qaramadda Midoobay, Xilli Kenya ay tahay wadanka ay sida ugu daran u saameeysay Xasilooni daradda Soomaaliya.
“Qaramadda Midoobay waa in ay joojisaa Habdhaqanka ah lidka ah ee aan la aqbalikarin ee Heey’addu ku maalgelineeyso argagixisadda iyadoo laaluush siineeysa argagixisadda si ay gargaarka marin u siiyaan”.
Dowladda Kenya waa dalkii ugu horreeyay ee uu kasoo baxo war Qaramadda midoobay ku eedeeynaya in ay maalgeliso Al-shabaab.
Majirto wali jawaab laga hayo dhanka Qaramada Midoobay.
Previous articleCiidamada Xooga Dalka oo howlgalo kawada G/shabeelaha Hoose sheegayna In
Next articleKulankii Golaha Shacabka Oo qarka usaaran Inuu Baaqdo iyo warar sheegaya In…..
Xog: Xaafada laga soo riday madaafiicdii lagu garaacay qaybo ka mid ah Muqdisho
Muxuu MD Farmaajo kala hadlay Ehalada Marxuun Cali Khaliif Galeyr oo uu la kulmay?
Sawirro:Malaayiin qof ayaa ka qayb gashay mudaharaadyada isbeddelka cimilada ee caalamka ka socda
DF oo shaqada ka ceyrisay 300 oo ah ciidamo Axmed Madoobe loo diyaarsaday
Qoor Qoor Oo Dhuusamareeb Kula Kulmay Guddiga Doorashooyinka & Hal Arin oo kala hadlay
Puntland iyo Somaliland oo eedeyn hawada isku mariyay & Xiisada oo si karoortay+Wararkii ugu danbeyay